Topnepalnews.com | आरबीआई भन्छ– बैंकसँग भएको मात्रै साट्छौं, व्यक्तिको साट्दैनौं
Posted on: November 17, 2016 | views: 738
काठमाडौं,मंसिर २ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले नेपाली नागरिकसँग रहेको ५ सय र हजारका भारु साट्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्री कृष्ण बहादुर महरा र नेपाल राष्ट्रका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको उपस्थितीमा बसेको अर्थ समितिको बैठकले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर नेपाली नागरिकसँग रहेको बैध भारतीय रुपैंयाँ साट्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
तर रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई)ले नेपालीसँग भएको भारतीय रुपैयाँ (भारु) नसाट्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकको स्रोत अनुसार आरबीआईले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपालीसँग भएको एक हजार र पाँच सयका भारु नोट लिन नसकिने जानकारी गराएको बताएको छ ।
आरबीआईले नेपालीसँग भएको पैसा नसाट्ने जनाउ दिएको छ । आरबीआईले नेपालका वाणिज्य बैंकहरुमा भएको पैसा भने लिने बताएको छ । “बैंकसँग भएको पैसा हामी साट्छौं,” आरबीइआईको भनाई उद्धृत गर्दै राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, “तर, जनतासँग भएको एक हजार र पाँच सयको नोट सटही गर्दैनौं ।” तर अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले भारतीय अर्थमन्त्रीसँग आफुले फोनमा कुरा गरेको र नेपालको चाहना अनुसार नोट सटहीको सुबिधा दिन उनी तयार रहेको जानकारी गराएका थिए ।
‘भारतीय अर्थमन्त्रीले नेपाली नागरिकको हितलाई मध्यनजर गर्दै ५०० र १०० दरका भारतीय नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउन आफु तयार रहेको बताउनुभएको छ’, अर्थमन्त्री महराले बैठकमा भने । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गरिहेको जानकारी गराएका थिए ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाका गभर्नर अजित पटेलसँग दैनिक २/३ पटक कुरा गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । आरबिआईका गभर्नर पटेलले नेपालमा रहेका ५०० र १०० दरका भारतीय नोट साट्ने कुरा आफ्नो हातमा मात्रै नरहेकाले उच्चस्तरमा कुटनीतिक लबिङ गर्न सुझाएको पनि बताएका थिए । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सो दरका भारतीय नोट ३ करोड ६० लाख ९० हजार मात्रै रहेको पनि उनले जानकारी गराएका थिए ।